Hydraulic tombo-kase, fingotra tombo-kase, Guide horonam-peo - def
harena ankibon'ny tany tombo-kase
Spring tanjaka tombo-kase
Aerial sary ny orinasa - 1
Aerial sary ny orinasa - 2
Tombo-kase Guangdong def Solutions Co., Ltd. no hita tamin'ny 2004, izay is a technology enterprise with R&D, production and sales department, manufactures a wide range of hydraulic seals, PTFE products applied to harsh conditions, special custom PU and rubber seals.
R & D Capability Amin'ny mpiasa ny 18 injeniera, sivy izay mifantoka amin'ny R & D, no nahazo 18 famoronana Patents-pirenena.
Production Capability def manana penitra roa zavamaniry hatramin'ny 10.000 metatra toradroa tsirairay, izay tsy tapaka mari-pana / hamandoana PTFE atrikasa no nanangana. Ny famokarana fitaovana nafarana Anisan'ny mitsangana / marindrano CNC milina, 2000T menaka pressers, solosaina-maso sintering lafaoro lehibe, nanarato Pu milina, fingotra mampifangaro milina, vulcanizing milina, sns fanao izahay, ka mamoaka PTFE / Pu / fingotra tombo-kase amin'ny habeny avy 1mm ho 1500mm.
Symmetric tombo-kase andian-dahatsoratra